VCI akwụkwọ maka ọla kọpa - China Ma Anshan Steel Packaging
VCI akwụkwọ maka ferrous metal
VCI akwụkwọ maka ọla kọpa
VCI akwụkwọ laminated kpara akwa
Pee ntekwasa na-abụghị kpara
VCI akwụkwọ maka ọla kọpa -Eco-enyi na enyi, echekwa na otutu mgbochi corrosion nkwakọ ihe E nwere ihe abụọ dị iche iche nke ọdịdị na ewepụghị akwụkwọ na crepe akwụkwọ. The crepe akwụkwọ nwere ike kechie warara metal mpempe akwụkwọ. Ọ pụrụ igbochi ọla kọpa mpempe akwụkwọ si discolor na corrosion. VCI akwụkwọ ike-emepụta nzute ụkpụrụ nke JIS Z 0321-1997 "VCI akwụkwọ maka ọla kọpa na ya alloy". E biri ebi VCI akwụkwọ dị. MPTE si VCI akwụkwọ kpamkpam dochie mkpa nkịtị corrosion nchedo ụzọ ndị dị otú ahụ ...
Min.Order ibu: 100-500 kgs
Tụkwasịnụ Ikike: 2,000 Tọn kwa ọnwa
-Eco-enyi na enyi, echekwa na otutu mgbochi corrosion nkwakọ ihe
E nwere ihe abụọ dị iche iche nke ọdịdị na ewepụghị akwụkwọ na crepe akwụkwọ. The crepe akwụkwọ nwere ike kechie warara metal mpempe akwụkwọ. Ọ pụrụ igbochi ọla kọpa mpempe akwụkwọ si discolor na corrosion. VCI akwụkwọ ike-emepụta nzute ụkpụrụ nke JIS Z 0321-1997 "VCI akwụkwọ maka ọla kọpa na ya alloy". E biri ebi VCI akwụkwọ dị.
MPTE si VCI akwụkwọ kpamkpam dochie mkpa nkịtị corrosion nchedo ụzọ ndị dị otú ahụ dị ka griiz na mmanụ na-ahapụ ndị ọla fọduru free na njikere iji. Your mmiri, igwe na tupu chepụtara metal akụkụ nke carbon nchara na nkedo-ígwè nwere ike n'ụzọ dị mfe ma na-eri irè ọbọp na corrosion free.
Ahụkarị odide nke VCI akwụkwọ:
◆ Ugboro abụọ ọrụ nke Alụlụụ corrosion inhibitor na kọntaktị corrosion inhibitor
◆ Mkpa bụghị uwe antirust mmanụ, na-arụ ọrụ dị irè, oru izoputa.
◆ Alternative Ọdịdị, na-enwe dị iche iche ike
◆ Ogologo oge nchedo nke ọla kọpa, ọla na ha alloys.
◆ Protection nke ọla si corrosion n'oge njem
◆ obere nchekwa nke dara n'akụkụ dị iche iche nkebi nke n'ichepụta
◆ Dị interleaves ma ọ bụ n'ihi na onye wrapping nke akụkụ
◆ Iji ịgbatị ngwaahịa ndụ okirikiri nke dara mmiri na ígwè ọrụ
◆ Iji environmentally friendly na-eri-oru oma
MPTE si Alụlụụ corrosion Inhibitor VCI akwụkwọ ndị dị na a dịgasị iche iche nke nhọrọ aka izute gị mkpa:
Ewepụghị mpempe akwụkwọ, na-apụta dị ka size mmasị
Extendable, creped nsụgharị, mesikwuru ma ọ bụ laminated, polyethylene (Pee) ntekwasa
Dị iche iche igwe (60 -300g / m2)
Wrappers, interleaves, inserts maka akpa
Ahịa kpọmkwem ngwọta dị ka mbadamba, VCI discs, wdg
Wax akwụkwọ na ndị ọzọ pụrụ iche mgbochi ntekwasa akwụkwọ inye ukwuu ọbụna nchebe.
Dị ka ike na Ọdịdị nke nkwakọ ihe, gụnyere:
VCI // Ewepụghị anọpụ iche kraft akwụkwọ
General waterproof mkpọ
VCI // Ewepụghị anọpụ iche kraft akwụkwọ // Pee film
Arọ waterproof mkpọ
VCI // Ewepụghị anọpụ iche kraft akwụkwọ // Pee film // Pee kpara
VCI // Ewepụghị anọpụ iche kraft akwụkwọ // Pee film // Pee kpara // Pee film
VCI // crepe anọpụ iche kraft akwụkwọ
VCI // crepe anọpụ iche kraft akwụkwọ // Pee film
VCI // crepe anọpụ iche kraft akwụkwọ // Pee film // Pee kpara
A dvantages nke MPTE si Alụlụụ corrosion inhibitors VCI akwụkwọ:
Na-eri ego gị ụlọ ọrụ
Pụrụ ịdabere corrosion free na ogologo okwu nchebe maka a dịgasị iche iche nke gị ngwaahịa
Ọ dịghị gburugburu ebe obibi, ahụ ike ma ọ bụ nchekwa mbibi
Simple na ala ngwa
Pụrụ ịdabere na ozugbo technical ndụmọdụ si MPTE si oru otu, ya na a dịgasị iche iche nke ngwaahịa na nhọrọ ilebara gị kpọmkwem mkpa
Mma site zuru ụwa ọnụ na-emepụta na ígwè na-eme, aluminum, akpakanamde ụlọ ọrụ
Previous: waterproof paperboard
Osote: VCI akwụkwọ maka ferrous metal
Antirust Steel Wrapping VCI Kraft Akwụkwọ
HDPE laminated VCI Akwụkwọ
Pee ntekwasa VCI Anti-nchara Kraft Akwụkwọ
Mesikwuru VCI Crepe Kraft Akwụkwọ
Mesikwuru VCI Akwụkwọ N'ihi Steel efere
Mesikwuru VCI akwụkwọ With Pee / eyi Laminations
Vci Creping Akwụkwọ
VCI Metal Kechie
VCI nchara Mgbochi Akwụkwọ N'ihi mapụtara Parts
Waterproof Steel Wrapping Akwụkwọ
Pee ntekwasa crepe akwụkwọ
VCI akwụkwọ maka Multi-metal
VCI eyi kpara Kechie film